Petr Ceck Oo Sheegay Inuu Hayso Kalsoonida Mourinho Iyo Werwer La Weriyey Inuu Haysto
HomeEnglandPetr Ceck Oo Sheegay Inuu Hayso Kalsoonida Mourinho Iyo Werwer La Weriyey Inuu Haysto
Gool-hayaha khabiirka ah ee kooxda kubadda cagta Chelsea, Petr Ceck ayaa ka hadlay qaab-ciyaareedkiisa, isla markaana difaacay khaladaad badan oo la sheegay inuu sameeyey ciyaarihii u dambeeyey, gaar ahaan kulankii Champions League ee ay isaga hor yimaadeen kooxda PSG.
Petr Ceck, waxa uu sheegay in aanu wax cabsi ah ka qabin gool-hayaha amaahda kula jooga Atletico Madrid ee Thibaut Courtois kaas oo la sheegay inuu kooxda ku soo noqonayo, iyadoo ay mucaashaqiinta kubadda cagta gaar ahaan kuwa Chelsea ay la dhacsan yihiin da’yarkooda amaahda kaga maqan.
Mr. Ceck, waxa uu ku dooday inuu wali hayso qalbiga tababare Mourinho, taas darteedna aanay jirin sabab uu ugu cabsado inuu waayo booskiisa.
Wargeyska Daily Mail oo arrintan wax ka qoray, ayaa faalladiisa ku sheegay in Petr Ceck uu ogsoon yahay halka ay sartu ka qudhunsan tahay, isla markaana uu si aad ah uga cabsi qabo soo laabashada Thibaut Courtois. “Petr Ceck wuu ogyahay halka ay su’aashu ka taagan tahay. Wuxuu ogyahay in Thibaut Courtois uu yahay libaax.” Ayuu yidhi wargeysku, waxaanu intaa ku daray “Courtois wuxuu ku sugan yahay Spain oo uu amah kula joogo Atletico Madrid, oo uu la joogay saddex sannadood, laakiin Jose Mourinho wuxuu sheegay inuu ku laabanayo London, taasina waxay si cad u gulgishay Cech oo ah goolhayaha koowaad ee aanu muranku gelin bookiisa tobankii sannadood ee u dambeeyey”
Goolhayaha khabiirka ah ee Ceck, ayaa wuxuu dhigay rikoodh cusub kooxdaas kadib markii uu shabaqiisa kubadda ka illaaliyey kulamo badan. Sidoo kale, wuxuu u saftay kooxdaas in ka badan 100 kulan oo tartanka Champions League ah, isagoo si gaar ah xusuusta kooxdaas u galay markii uu rikoodheyaal ka badbaadiyey kulankii 2012 ee ay Chelsea ku qaaday koobka Champions League, xilligaas oo ay isugu soo baxeen ciyaarta u dambaysa kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich.
Mr. Petr Ceck, waxa sannadkan 2014 lagaga dhaliyey garoonkiisa Stamford Bridge hal gool oo kaliya, laakiin waxa ay hadda da’diisu tahay 31 jir, waxaana toban sannadood ka yar Courtois oo isaguna sidaas oo kale kooxdiisa halbowle u ah, muujiyeyna qaab-ciyaareed wanaagsan, waxaana loo arkaa inuu yahay gool-hayaha Chelsea ee 15-ka sannadood ee soo socda.